रुसले बनाएको कोरोना खोप फिलिपिन्समा पनि परिक्षणको तयारी ! - सिम्रिक खबर
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई लाख ७४ हजार नाघ्यो अमेरिकी औषधि कम्पनी मोडेर्नाले अमेरिका र युरोपमा खोपको प्रयोगका लागि मङ्गलबार अनुमति माग्ने डा. बाबुराम भट्टराईले २१औं शताब्दीमा सार्वभौम बनेका जनता फेरि दासतामा नफर्किने टिप्पणी गरे डब्ल्यूएचओले कोरोना भाइरसको उत्पत्ति स्थल थाहा पाउन निकै नै आवश्यक रहेको बतायो हेर्नुहोस् मंसिर १६ गते मंगलवार डिसेम्बर १ तारीख को राशिफल, पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन् काठमाडौं उपत्यकामा थप ८०९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
रुसले बनाएको कोरोना खोप फिलिपिन्समा पनि परिक्षणको तयारी !
रुसले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको बारेमा विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । पर्याप्त परिक्षण विना खोप घोषणा गरिएको भन्दै धेरै देश तथा वैज्ञानिकहरुले प्रश्न खडा गरेका हुन् ।
तर यसैबिच स्पुतनिक भि नाम दिइएको उक्त खोपको तेस्रो चरणको परिक्षण फिलिपिन्समा अक्टुबर देखी आउने मार्चको बीचमा हुने भएकोछ। फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिका प्रवक्ता ह्यारी रोकले बिहीबार बिहान भनेका छन् कि रूसी कोरोना खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण अक्टोबरदेखि मार्च सम्म फिलिपिन्समा हुनेछ।
वास्तवमा रसियाले ट्रायलको तेस्रो चरण अघि कोरोना खोपको विकास घोषणा गरेर सारा विश्वलाई चकित पारेको छ। यद्यपि यो खोपको विषयमा विश्वमा तिव्र आंशकाहरु आइरहेका छन् ।
इन्क्वायर अखबारका अनुसार प्रवक्ताले रूसी सरकारले यो खोप परीक्षणको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । खोपको दक्षता र सुरक्षा परीक्षण गर्न हजारौं बिरामीहरूलाई खोप दिइनेछ।
फिलिपिन्सको खाद्य र औषधि प्रशासनले अप्रिल २०२१ सम्ममा रुसले बनाएको खोप स्वीकृत गर्ने अपेक्षा राखेको छ। यो खोप रूसको गमल्याया अनुसन्धान संस्थान र रक्षा मन्त्रालयले एकसाथ तयार गरेको हो।
यसको नाम स्पुतनिक भि हो, जुन मंगलबार दर्ता गरिएको थियो। रूसी राष्ट्रपति पुटिनले आफैंले यो घोषणा गर्दै आफ्नी छोरीलाइ दिएको बताएका थिए ।
यस्तै फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेले रूसी निर्मित कोरोना भाइरस कोविड १९ विरुद्धको खोप आफैमा प्रयोग गर्न चाहेको बताएका छन् । हाल उनीहरुले मस्कोसँग मेडिकल टेस्ट र खोपको उत्पादनमा सहयोग पुर्याइरहेका छन्।
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई लाख ७४ हजार नाघ्यो
अमेरिकी औषधि कम्पनी मोडेर्नाले अमेरिका र युरोपमा खोपको प्रयोगका लागि मङ्गलबार अनुमति माग्ने
डा. बाबुराम भट्टराईले २१औं शताब्दीमा सार्वभौम बनेका जनता फेरि दासतामा नफर्किने टिप्पणी गरे
डब्ल्यूएचओले कोरोना भाइरसको उत्पत्ति स्थल थाहा पाउन निकै नै आवश्यक रहेको बतायो